Ammaanka Xarunta Baarlamaanka Somalia Oo Si weyn loo adkeynayo Maanta |
Ammaanka Xarunta Baarlamaanka Somalia Oo Si weyn loo adkeynayo Maanta
nolvadex for sale, generic Zoloft. Ka gadaal weerarkii Shalay Dagaalyahano ka tirsan Ururka Dhaq dhaqaaqa Al-shabaab ay ku qaadeen Xarunta Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa maanta waxaa si weyn loo adkeynayaa Ammaanka Xarunta Golaha Shacabka, waxaana Ammaanka Sugaya Ciidamo AMISOM iyo kuwa Soomaaliya iskugu jira.
Ciidamada Soomaalida ah ee Sida gaar ah u tababaran ee GAASHAAN loo yaqaano ayaa ka mid ah Ciidamada Sugaya Ammaanka Xarunta Golaha Shacabka,iyaga oo dadweynaha iyo gaadiidka u diidaya in ay maraan waddooyinka soo gala Xarunta iyo Agagaarkeeda, waxaana tallaabadaani ay tahay mid looga jawaabayo weerarkii shalay lagu qaaday xarunta Baarlamaanka.
Ku dhawaad 15 ruux ayaa ku dhintay weerarkii shalay ku dhawaad 30 kalena waa ay ku dhaawacmeen, waxaana bur bur xooggan uu ka soo gaaray qaybo ka mid ah dhismaha Xarunta Baarlamaanka, halkaasi oo lagu wado in uu maanta Booqdo Madaxweynaha Soomaaliya Xassan Sheekh Maxamuud oo dalka dib ugu soo laabanaya.
Ururka Al-shabaab ayaa sheegtay Masuuliyadda weerarkii shalay lagu qaaday Xarunta Baarlamaanka Soomaaliya, waxaana ay hanjabaad xooggan u jeediyeen Xildhibaanada Baarlamaanka oo ay sheegeen in ay mid mid u toogan doonaan, Afhayeenka Ururka Al-shabaab Sheekh Cali dheere ayaa ugu hanjabay Baarlamaanka in ay layn doonaan oo ay sii kordhin doonaan weerarada ay ku qaadayaan.